काठमाडाै । बिहिबार स्वयम्भूको तीनधाराबाट पक्राउ परेका दीपक मनाङ्गे उर्फ राजिव गुरूङलार्इ डिल्लीबजार जेल चलान गरीएकाे छ । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले मनाङ्गेलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव जिते पनि कैद भुक्तान बाँकी रहेको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै मनाङ्गे फरार भएका थिए । फरार सूचीमा रहेका मनाङेका लागि रेडकर्नर नोटिस जारी गरी खोजी गरिररहेको थियो।केहि दिनयता उनी नेपाल अाएकाे खबर पाएपछि नेपाल प्रहरीले खाेजीकाे कार्य तिव्र पारेकाे थियाे । २०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेसहित गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवारलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०६१ सालमा मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६९ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो। २०७० साल जेठ १० गते दर्ता भएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख ०७, २०७५११:४३
शेयर बजार बढ्यो !
आज दिउँसो सुनचाँदी पसलमा बम विष्फोट हुँदा आठजना घाइते !
सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा भूमिका खेल्न नेपाल र भारतका सांसद सहमत
मनसुन बाहिरिएसँगै चिसो बढ्यो, यस्तो हुनेछ तीन दिन देशभरको मौसम !
एनसेललाई ३८ अर्ब कर बुझाउन सर्वाच्चको आदेश !